HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 14-NOV-2020
Saturday November 14, 2020 - 09:41:15 in Wararka by Mogadishu Times
FARMAAJO oo saxiixay heshiiska doora shooyinka, soona saaray war cusub
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo ayaa saxiixay Heshiiskii Siyaasadeed ee Doorashooyinka Dadban kaas oo Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ay si wadajir ah cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen 26-kii Sebteembar 2020.
Madaxweynaha ayaa tilm aamay in saxiixa heshiiskan uu caddeyn buuxda u yahay sida ay uga go’an tahay Maamulka uu hoggaamiyo sii ambaqadid da hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo qabsoomidda doorasho saldhigeedu yahay He shiiskii Muqdisho ay ku gaareen Madaxda Heer Federaal iyo heer D/G/ 17-kii Seb teemar 2020.
"Waxaan dalka u jihaynay doorasho. Laga soo bilaabo 1-dii Bishii Oktoobar ee sanadkan oo aan la saxiixanay Madaxda D/G/yada dalka Heshiiskii Habraacyada doorashooyinka, waxa an qaadnay tallaabooyinka Heer Federaal ee ku aaddan qabsoomidda doorashada iyo dhaqan gelinta dhammaan qodobbada ku jira Heshiiska Siyaasadeed ee Jiheynta Doorashada Baarla maanka Federaalka.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyey Madaxda D/G/yada iyo Maamulka G/ Banaadir dadaalkii ay ku bixiyeen in heshiis laga gaaro wadahadalladii ku saabsanaa hannaanka door ashooyinka dalka ee ku qabsoomay Samareeb iyo Muqdisho.
Sidoo kale, Madaxweynaha JFS ayaa uga mahad celiyey Guddoonka iyo Xildhibaannada G/Shacabka iyo Aqalka Sare dhammeystirka ha braacii uu sharciga ku noqday Heshiiskii Siyaa sadeed ee Doorashooyinka.
Ugu dambeyntii, Madaxweyne Farmaajo ay aa faray Xukuumadda dardargelinta doorkeeda ku aaddan fududeynta qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskan ay ansixiyeen Baarlama anku, kuna meel maray saxiixa Madaxweynaha.
CABDI XAASHI oo si adag uga jawaabay eedeyntii uga timid Mahdi Guuleed
Gudoomiyaha Aqalka Sare Md.Cabdi Xaashi ayaa meel ka dhac ku tilmaamay hadal kasoo yeeray R/wasaare ku xigeenka DFS Md.Mahdi Maxamed Guuleed, sidoo kalana wuxuu sheeg ay inuu wali ku adkeysanayo go’aankii uu ka ga aray gudiyaada ay dowladda magacowday ee doorashada 2021.
"Arintaasi waa gaf, isag ana ayey u gaar tahay” ayuu Cabdi Xaashi u she egay idaacadda VOA-da laanteeda Afka Soomaa liga, sidoo kalana wuxuu taliyaha Nabad-sugi dda Fahad Yaasiin ku eedeeyay inuu isaga doo nayo inuu soo xulo xubnaha ka mid noonaya guddiyada codeynta.Mushkiladda u dhaxeysa dowladda dhexe iyo gudoomiyaha aqalka sare waxey tahay soo xulista guddiga doorashooyin ka ee ka wakiilka ah Somaliland, wuxuuna she egay iney doonayaan iney soo xulaan dadka ha lkaas kasoo jeeda, sidoo kalana ay guuldaro weyn ka imaan doonto haddii aan sidaas la sameyn.
Waxaa laga cabsi qabaa in jadwalka doora shooyinka ay dib u dhacaan sabab la xariirta in la saluugsan yahay guddiyada doorashooyinka oo ay dowladdu magacowday oo la tuhmay iney ku jiraan xubno ka tirsan Nabad-sugidda, shaq aalaha Villa Somalia iyo qaar ka mid ah taageer ayaasha dowladda.
Xubnaha Mucaaradka waxey si cad u diidan yahiin guddiyada doorashada ee ay dowladda magacowday, waxeyna aaminsan yahiin iney ari ntaas kasoo horjeedo heshiiskii wadar ahaanta loo gaaray ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Waxaa laga digay khalalaase ka dhaca wa danka, sidaas darteed hay’ad caalami ah ayaa ku baaqday in muddo kororsi la sameeyo si dhib aatada looga baaqsado, balse xubnaha mucaar adka wey ka biyo diideen arintaas.
Lama oga sida ay xaaladdu ku biyo shuban doonto, balse waxaa aad looga digayaa dhiba ato, waxeyna arintaani kusoo aadyesaa xilli Soo maaliya ay ku jirto marxalad kor u kac ah tan iyo markii ay ka burburtay xukuumadii Militariga ho raantii sagaashamaadkii.
Maalgashiga Turkigu ku sameeyay Soomaa liya oo gaaray $ 1 bilyan iyo QM oo ka hada shay
Maalgashiga iyo kaalmada horumarineed ee Turkigu siiyo Soomaaliya ayaa saameyn bal laaran oo dhaqaale ku yeeshay Koboca dhaqa alaha iyo yareynta dhibaatooyinka shaqo la’aan ta ay ka mid yihiin, sida uu sheegay wakiilka ga arka ah ee xoghayaha guud ee QM ee Sooma al iya.
"Waxaan aragnaa jawaa bta Turkiga ee baa hiyaha mu hiimka ah. Dadaallada Turk iga ee ku aaddan dhismaha waddooyinka [ama] shirkada ha gaarka loo lee yahay ee lagu horumarinayo shaqada iyo wax qabadka garoonka si loo hu biyo in howlaha de kedda ay saameyn ballaaran ku yeesheen dhaq aalaha, gaar ahaan M/Muqd isho, ”ayuu James Swan u sheegay wargeyska Daily News ee Hürr iyet.
Waxaa uuintaasi kusii daray "Kuwani waa qaybo muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka,”. Xiriirka 2da dhinac ee Turkiga iyo So omaaliya ayaa xoogeystay tan iyo sanadkii 20 11-kii markii Ankara ay gacan siisay waddanka ku yaalla Geeska Afrika xilligii ay ku jirtay mac aluusha ba’an.
Maaddaama R/W/hii xilligaas oo hadda ah madaxweynaha xilka haya Recep Tayyip Erdo uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee aan Afrikaan ahayn ee booqda Soomaaliya, labada dal tan iyo xilligaas waxay lahaayeen iskaashi dhow.
Maanta, maalgashiga Turkiga ee Soomaali ya wuxuu gaarayaa qadar dhan $ 1 bilyan, Mar ka laga reebo howlaha bani’aadanimo iyo hour marka, Turkiga sidoo kale wuxuu ku leeyahay saldhigii militari abid ugu weynaa meel ka baxs an Turkiga.
"Taageerada balaaran ee loo fidiyay barnaam ijka tababarka ciidamada ee Turkiga waxay gac an ka gaysatay dhismaha awooda amniga ee Soomaaliya. Tani waa muhiim maxaa yeelay, u gu dambeyn rajada laga qabo waxay tahay in cii damada Soomaaliya ay la wareegaan mas’uu liyadda 1aad ee amniga qaranka. ”ayuu yiri Swan.
Dhowaan, Turkiga iyo dalal kale oo badan ay aa hoos u dhigay deynta Soomaaliya ay ku lee dahay Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF), iya da oo qayb ka ah dadaallada sanduuqa la bilaa bay horaantii sanadkan si looga cafiyo deymaha culus ee dalalka dakhligoodu hooseeyo.
Sida laga soo xigtay Swan, deynta laga caf iyay waxay muhiim u tahay Soomaaliya si ay u hesho maalgelin deeqo cusub, gaar ahaan markay la tacaaleyso cudurka faafa ee COVID-19.
Warta Degmada Boondheere oo ku fatah day xaafado ka mid ah degmada
Roobabkii ka da’ayay M/Muqdisho maalma hii u dambeeyay ayaa sababay fatahaad ay sa meyeen bulaacadaha ku yaala M/Muqdisho, gaar ahaan bulaacadda Warta Boondheere ee G/Banaadir oo ku fatahday qaar ka mid ah xaaf adaha Degmada Boondheere, taasi oo saam eyn ku yeelatay nolosha iyo caafimaadka dadka danta yar ee ku nool Degmada Boondheere
Bulaacadan ku taala Degmada Boondheere oo buux dhaaftay ayaa keentay in xaafado qaar ay go’doon galaan oo dadka deegaanka ay ka cabanayaan biyaha ka yimid bulacaadda inay go’doomiyeen, waxaana maamulka Degmada Boondheere oo kaashanaya kan Gobolka Ba naadir ay ku xireen warta matoor loogu tala gal ay in uu ka saaro biyaha ku jira, iyadoo ay xiran yihiin ilaha biyo mareena da ee horay badda ugu shubi jiray.
Qaar ka mid ah dadka ku nool Degmaad Boondh eere oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay dhibaato weyn ku qabaan biyaha wasaqda ah ee ka imaanaya Warta Boondh eere.
Raxma Maxamed Geeddi oo ka mid ah how lwadeenada caafimaadka MCH Degmada Boo ndheere ayaa ka hadashay dhibaatooyinka dhin aca caafimaadka ah ee ka dhashay Warta iyo si da ay saameysay bulshada ku nool Degmada.
Qaar ka mid ah odayaasha iyo culimada ku nool Degmada ayaa codsaday in loo dhiso goobaha biyo mareenada oo biya ha roobka badda ku shubi jiray.
Gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degm ada Boondheere Suldaan Maxamed Aweys Ax med ayaa sheegay in bulshada degmada uu sa ameyn ku yeeshay Warta, isagoo intaa ku daray in ka maamul ahaan ay ku dadaali doonaan sidii biyaha looga saari lahaa Warta Boondheere.
Xukuumadda oo ka hadashay hannaan ka doorashooyinka iyo Amniga dalka xilliga doorashada
Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Md. Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan howllaha doorashooyinka, isagoo tilaamay in Xukuumad du ay ku taagantahay fulinta qodobada heshiiskii ka soo baxay shirarkii Samareeb iyo Muqdisho, isla markaana ay wax walba oo la xir iira doorashooyinku ku qabsoomi doonaan xiligii lagu heshiiyey, wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doo rashadu.
Sidoo kale Wasiirka ayaa ugu ba aqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dagaallamaya deegaannada hoostaga Galmu dug iyo Hirshabelle in colaadda ay ku joojiyaan shuruud la’aan, isagoo tilmaamay in odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradka deegaan adaas looga baahan yahay kaalintooda ku aad dan sidii colaadda loo joojin lahaa.
Dhanka kale Wasiirka Amniga Gudaha Md.Xasan Xundubey Jimcaale ayaa faray Ciid anka amniga in ay xoojiyaan nabadgelyada xili gan muhiimka ah ee lagu jiro doorashooyinka, wuxuuna xusay in amnigu uu yahay danguud oo muwaadin walba taabanaysa, loogana baahan yahay bulshadu in ciidanka ay gacan ku siiyaan sugidda amniga.
, Rajab Tey ib Erdogan ayaa la gu dhaliilay lac ago ay ka bixisay Soomaaliya horaantii bishan.
Mucaaradka dalka TurkI ga ayaa madaxwe yne Er dogan ku dhaliilay lacag ay xukuumadda Ank ara ka bixisay Soomaaliya, taas oo qeyb ka ah qo rshaha deyn cafi nta ee Soomaali ya. Mucarad ka ayaa sheegay in aysan ku qan acsaneyn dha qaalaha Turkiga uu ku daldalayo Soomaaliya xil ligan oo dhaqaalaha Turkiga uu saameeyay cud urka Covid 19 iyo dhibaatada ka dhalatay mus iibadii ka dhacday dalkaas.
Ali Mahir oo kamid ah mucaaradka dalka Tur kiga ayaa dowladda ku eedeeyay in lacag bad an ay siiyay Soomaaliya balse aysan dhaqaale fiican siinin dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay dhul gariirkii ku dhuftay magalaada Izmir.
"Waxaad lacag dhan 10 Milyan oo Liira ugu deeqday dhibaatadii ka dhalatay dhul gariirka, halka lacag dhan 2.4 milyan oo doollar na aad ka bixisay Soomaaliya”, ayuu yiri Ali Mahir oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Turk iga ku qoray bartiisa Twiter-ka.
Turkiga ayaa horraantii bishan waxaa uu Turkiga faafinta rasmiga ah ee dowladda uu ku shaaciyay in lacag 2.4 milyan oo doollar uu ka bixiyay Soomaaliya, lacagtaas oo lagu wareejiy ay hey’adda lacagta adduunka iyo bangiga add uunka, si loo gaaro yoolka deyn cafinta Sooma aliya.Haseyeeshee tallaabada Turkiga waxaa soo dhaweeyay dowladda Soomalaaliya oo she egt ay in Turkiga ay uga mahadcelineyso taage era da dhaqaale ee uu siiyay.
"Waxaan si niyad sami leh ugu mahadcel inayaa madaxweynaha Turkiga, taageerada dha qaale ee uu Soomaaliya la garab taagan yahay, gaar ahaan dib u habeynta dhaqaalaha dalka, taas oo keentay in Turkiga uu bixiyay deynta la gu leeyahay Soomaaliya”, sidaas waxaa boggii sa Twiter ku qoray wasiirka cusub ee wasaarad da cadaaladda, Cabdulqaadir Maxamed.
Inkastoo aan la ogeyn culeyska arrintan ay ku keeneyso dowladda Turkiga, haddana sha cab badan oo Turki ah waxaan ka qarsaneyn ta gaeerada dhaqaale, mida gargaar iyo tan amni ee uu Turkiga siiyo Soomaaliya, walow dadka qaar ay hadda ku andaconayaan in marka hore ay tahay in dowladda ay ahmiyadda siiso dhib aatooyinka ka jira dalka, gaar ahaan saameynta dhaqaale ee ka dhalatay Covid 19 iyo musiibadii ka dhacday Izmir.
Deynta Soomaaliya lagu lahaa ayaa gaar eysay 5.2 bilyan oo doollar balse waxaa hadda lagu soo warramayaa inay gaadhay 3.7 milyan oo doollar kadib markii dalal badan oo caalamka ay cafiyen deymihii ay ku lahaayeen Soomaliya, halka qeyb kale oo kamid ahna la bixiyay. Dala lka tagaeeray deyn cafinta Soomaaliya ayaa ga araya in kabadan boqol wadan oo Turkiga uu ka mid yahay, waxaana haddii la dhameeyo deyn cafinta la aminsan yahay in Soomaaliya ay u sahli doonta kobac dhaqaale, la macaamilka hey’adaha dhaqaalaha adduunka iyo inay fur sad u heli doontaa taageera dhaqale. Xog: Ciidanka ilaalada Villa Somalia oo la-Dallacsi iyay hal arrin-na laga codsaday Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Ca bdullaahi Farmaajo ayaa dalacsiiyay dhamaan ciidanka ilaalada Madaxto oyada Soomaaliya ee loo yaqaano Koofiya-cas, wax aana saraakiish ooda loo jeediyay darda aran iyo tal ooyinka yim id Ma daxweynaha. Warar lagu kals oon yahay oo ay heshay Caasimada Online ay aa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo dalacsi iyay dhamaan ciidanka koofiya-casta waxa uu na u sheegay in ay ku amaanan-yihiin qaabkii ay ula shaqeey een Madaxweynaha oo hada gabo-gabo ah mu ddo xileedkiisa.
Xogaha aan helnay ayaa sidoo kale sheega ya in Madaxweyne Farmaajo ciidanka kula dar daarmay in ay noqdaan ciidan Qaran oo ay iska dhigaan Shaatiga Qabiilka iyo nin Jecleysiga, is agoo aad uga kala hadlay dhiiri gelinta colaada ee siyaasiinta qaar.
Ciidankaan oo maalmihii la soo dhaafay in badan oo kamid ah u socday tababar iyo kul amo wacyi gelin ah ayaa la sheegay in waqtiyo badan loo aqriyay fariimo iyo talooyin ka yimid Madaxweynaha halka waqtiyo aan badneen uu Madaxweynaha qaabilay saraakiil ka tirsan ciidanka Koofiya-casta.
Dhamaan dadka aan la hadalnay ayaa noo sheegay in Madaxweynaha uu saraakiisha ku adkeeyay in aysan u dhaga-nuglaanin hadala da qabyaaladeysan ee siyaasiinta isagoo sidoo kale u sheegay inuu yahay Madaxweynihii ugu horeeyay oo si wadajir ah min hal darajo u dal acsiiyay ciidankaan.
Khubarada amniga ayaa sheegay in talaa booyinkaan ay yihiin kuwa uu Madaxweynaha ku xoojinayo moraalka ciidanka ilaalada u ah maadaama uu dalka galay xaalad adag, isla markaana ay jiraan siyaasiin badan oo ku baaq aya in dadka Banaadir, HirShabeelle iyo Galmu dug isku duubni muujiyaan
Golaha Amaanka QM oo ka fakaraayo in Soo maaliya cunaqataynta hubka laga qaado
Golaha Amaanka Q/Midoowe ayaa markii ugu horeesey tan iyo 1992 magacaabey Guddi ka shaqeeya sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saarnaa ku dhawaad mudo 30 sano ah.
Soomaaliya wey adag tahay in laga qaado gebi ahaan cunaqabateynta hubka saaran sab abtu waxey tahay Soomaalida siyaasiyiinteeda ama madaxdeeda weli kuma he shiin siyaasada dalka, sidoo ka le qabaa’ilada Soomaalida dhex dooda dib u heshiisiin dhab ah lagama sameyn, kalsoonidii bul shana weli wey liidataa.
Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleed yada weli heshiin kuma aha qaabkii loo qaybsan lahaa ciidamada qaran ee dalku yeelan lahaa. Weli diyaar ma aha sharuuc dii ciidanka lagu dhaqi lahaa ee qeyxayey mas’u uliyadooda iyo waajibaadkooda.
Soomaaliya waa wadan weli aan dhisnayn haykalkiisa dowladnimo, sharci ka jirin. Qaram add a Midoobe waxey ka baqeysaa haddii had da laga qaado Soomaaliya cunaqabateynta hub ka in hubkaas lagu gumaado ama lagu dhiba atee yo dad shacab ah sidii Baydhabo ka dhac dey 2018-kii ama hubkaas gacanta u galo Al Shabaab sidii hore u dhacdey. Soomaaliya taari ikh xun bey leedahay, diya aradii qaranka ayaa 1988 loo adeegsadey in la gu duqeeyo Harge ysa, ciidamadii qaranka ayaa gobolada dhaxe iyo waqooyiga Soomaaliya ka geystey dacadiyo ka baxsan xuququl insaanka.
Waqtiga keliya ayaa isbedeley laakiin caq liga qofka Soomaaliga weli wax weyn iskama be delin, halis waxaa weli muuqata in wixii hore u dhacey wax la mid ah dib u dhici karaan.
Mashruuca hub ka qaadista Soomaaliya ma aha howl fudud. Dowlad heshiis lagu yahay oo shacabku ku kalsoonyihiin oo ilaalisa sharuucda dalka u yaal iyo xaquuqul insaanka ayaa shardi u ah in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka. Qore Ilyas Mohamud Hussein
Ciidanka Ammaanka Galgaduud Oo Gacanta Ku Dhigay Aabbe La Sheegay In Uu Wiilkiisa Dilay
Ciidamada Ammaanka M/Dhuuasamareeb ee Xarunta G/Galgaduud ayaa gacanta ku dhi gay Aabbe iyo Wiil uu dhalay oo lagu eedayay inay dileen Wiilkooda oo dhimirka ka Xanuunsa naa, kaasi oo Habeen hore Deg aanka Mareer gur lagu dilay.
Ciidanka oo Holwgallo Sameeyay ayaa lasoo sheegayaa in ay Gacanta ku hayaan Aabbihii dhalay Marxuumka iyo Walaalkiis, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay dileen Marxuumka Habeen hore lagu dilay degaankaasi Mareergur.
Marxuumka Habeen hore la dilay ayaa lagu Maga caabaa Tima Jilic Haareey, waxana hadda dil kaasi looga shakisan yahay Aabbihiis Haareey Jaamac iyo Wiil la dhashay Marxuum ka oo lagu Magacaabo Gallad Haareey.
Waxa Xusid mudan in Marxuumka la dilay uu ahaa Qof dhimirka ka Xanuunsan, waxaana uu ku xirnaa Geed ku yaalla Guriga Reerka uu ka dhashay.
Shalay ayay dadka degaanka Mareeergur ku soo Waaberiisteen dhacdadan oo arga-gax ku Abuurtay, waxaana la sheegay in Dadkii fal ka gaystay ay ku saantirteen Laamiga, waxa na goobta gaaray Ciidanka Ammaanka iyagoo Baaritaanno billaabay Xigasho:radiodalsan.com
I toobiya ayaa dib u celinaysa kumanaan as kari oo ka caawinayay dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto Urur ka Al-Shabaab Sidda ay xa qiijiyeen saraakiil sare oo ka tirsan dow ladda Itoobiya oo wax kala socday dib u celinta Ciidanka.
Itoobiya ayaa u yeertay ilaa 3,000 oo askari si ay uga caawiso weerarka Tigreega, waxaana Ciidankaasi lagu amray in aysan muujin ka bix itaankooda Soomaaliya oo uu ahaado mid ciidan.
Ciidamada la bixinayo waa askarta Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya ee hoos yimaada tali ska 5,000 oo ka socda dowladda Itoobiya oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta M/Afrika.
Hay’adda Cilmibaarista Heritage ayaa Warbi xin ay soo saartay ku dhaliishay qaabka ay ku socdaaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashooyinka ee dhaw aan lagu dhawaaqay. Markii asbuucii hore uu R/ Wasaaraha Soomaaliya magacaabay Guddiga Federaalka ee Hirgelinta Doorashooyinka, dalka waxaa u soo hormartay tilmaan muujinaysa wa xa laga fili karo doorashada soo socota ee baar lamaanka iyo midda madaxweyn aha ee dalka, taas oo ah: dib ugu noqosho wax isdabamarin baahs an oo la mid ah doorashadii 2016-ka.
Heritage ayaa sheegtay in guddiga loo xil sa aray in doorashada ay qabtaan ay ku jiraan sa raakiil ka tirsan xafiiska Madaxweynaha iyo mid ka Ra’iisul Wasaaraha, saraakiil xafiisyada ma daxda dowlad goboleedyada, diblomaasiyiin, saraakiil amni iyo shaqaale dowladeed.
Heritage ayaa sheegtay in guddiga doorasho oyinka iyo midka iyo xallinta khilaafaadka ee la ga soo buuxiyey shaqaalaha iyo taageerayaa sha madaxda qaranka iyo kuwa dowlad gobol eedka loona baahan yahay in la kala diro.
Waxa ay hay’adda soo jeedisay in lagu bed delo guddi ay ku jiraan shakhsiyaad sumcad ku dhex leh bulshada. Haddii madaxda DFS & kuwa D/G/yada aysan awoodin inay magacaab an guddi dhexdhexaad ah, walba ha soo maga caabaan guddi ay iska arki karaan dhammaan saamileyda siyaasadda, oo ay mucaaradku ku jiraan.
China '' waxaa naga go'an in aan heer sare geyno xiriirka nagala dhaxeeya Soomaaliya
Dowladda China ayaa sheegtay inay go'an tahay xiriir iskaashi oo qota dheer oo ay la ye elato Soomaaliya si ay qeyb wanaagsan uga noqoto tartanaka tartanka talalka Geeska Africa ee muhiimka u ah hormarka.
Mr.Wang Yi oo ah xubin sa re oo ka tirsan golaha deega anka China ayaa hadalka she egay ka dib markii ay khadka taleefoonka ku wada shee keysteen wasiirka arrimaha dibadda Somaliya Axmed Ciise Cawad.
Mr.Wang ayaa sheegay in Soomaaiya lagu tilmaami karo saxiib wanaagsan oo leysku ha leyn karo walaalna u ah sida uu hadalka u dhig ay dowladda China, isaga oo intaa raaciyay in Soomaaliya xubin muhiim ah ka tahay Iskaashi ga China iyo Africa iyo waliba kan kale ee China iyo Carabta.
Wang ayaa intaa sii raaciyay in dowladda Chi na diyaar u tahay in ay ka faa'ideysato fursada sanad-guurada 60-aad ee xiriirka diblomaasi yadeed ee labada dal si loo hirgeliyo is afgarad kii ay gaareen hoggaamiyeyaasha labada dal iyo in lagu riixo xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya meel sare.
"Waxeynu ka mid nahay dalalkii ugu horreeyay ee qiray madaxbannaanida Soomaaliya, Soom aaliyana waxay ahayd dalkii ugu horreeyay ee Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la same eya Jamhuuriyadda dadka Shiinaha” ayuu yiri Wang. Hadalkan ayaa imanaya xili Dowladda China ay siweyn uga carrootay xiriirka Diblom aasiyade ed ee Taiwan ay la yeelatay Somal ila nd oo ay aragto China talaabo aan sax aheyn.
Belgium oo tallaabo cajiib ah ka qaaday rag doonayay inay gubaan Qur’aanka
Dowlada Belgium-ka ayaa wadankeeda ka ceyrisay isla markaana muddo sanad ah ka ma mnuucday wadankeeda shan qofood oo la shee gay iney wadeen qorshe ay ku gubaan kitaabka Qur’aanka Kariimka. Shantaan qofood oo la she egay iney u dhasheen wadanka De nmark ayaa qorsheyn ayay iney deegaan ay Muslimii nta ku badan ya hiin falkaan foosha xun ku sameeyaan, balse waa laga hortag ay.Xoghayaha arrimaha gudaha dal ka Belgium Sammy Mahdi wuxuu da macaan ku tilmaamay mid ka hor imaanaya kala dambeynta iyo nidaa mka ka jira wadanka Bel gium-ka, waxaa xusid mudan iney taageero bu uxa u yahiin siyaasiga xagjirka ah ee Rasmus Paludan kaas oo ka tir san xisbiga Midig fog ee wadanka Denmark.
Siyaasigaan waxaa dhawaan laga soo ceyr iyay dalka Faransiiska todobaadkaan gudahiisa ka dib markii uu qudhiisa damcay inuu bartama ha magaalada Paris ku gubo kitaabka Qur’aan ka Kariimka.
Siyaasigaan islaam naceybka ku caan ba xay wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Stram Kurs, dhawaan ayaana lagu xiray dalka Denmark ka dib markii uu muuqaalo aflagaado u ah Islaam ka soo dhigay baraha bulshada. Warbaahinta maxaliga ah ee dalka Belgium-ka waxey qireen in xukuumadda ay ka hortagay qorshaha shan qof oo la tuhunsanaa iney deegaanka Molenb eek-Saint-Jean ee ka tirsan M/ Brussels falkaan ka geystaan. xoghayaha arrimaha gudaha dalka Belgium Sammy Mahdi waa shaqsi ku dhashay Belgium balse ay dhaleen qoys Ciraaq ah wux uuna aad usoo dhaweeya xarigga raggan iyo in dalka laga ceyriyo.
Ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ka jawaabay go’aankii kasoo baxay culimada Sacuudiga
Ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dalka M